One of our best sellers in Nyaung Shwe!Maineli Hotel offers accommodation in Nyaung Shwe, 1 km from Mingala Market. Free WiFi is accessible throughout the property. Delicious foods are served at the restaurant on site and free private parking is available for those who drive. All spacious rooms come with an air-conditioning,aflat-screen TV...
မင်္ဂလာပါရှင်…တောင်ကြီး/ အင်းလေး ကို အလည်လာကြမယ့် ခရီးသွားဧည့်သည်တော် များကိုတောင်ကြီးမြို့ နဲ့ လည်းမဝေး အင်းလေးရဲ့့ ဇက်ဆိပ်မြို့ လေး(ညောင်ရွှေ) မှာတည်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်မိုင်းလီ ( Hotel MaineLi) နဲ့ မိတ်ဆက်ပါရစေ ။ Hotel MaineLi မှာအခန်းပေါင်း ၂၅ ခန်းရှိပါတယ် ။ မနည်းလွန်းမများလွန်းတဲ့အနေအထားမှာပါရှင် ။ ဒါပေမယ့်အခန်းအမျိုးအစားအလိုက်ထူးခြားမှုလေးတွေရှိပါတယ် ။ ?ပထမဆုံး Maine Li Suite ဆိုတဲ့အခန်းလေးကို ပြောပြပါ့မယ် .. Maine Li Suite (2ခန်း ) ရှိပါတယ်။ ၁ခန်းမှာတော့1 Double bed နဲ့1 Single bed တစ်လုံးရှိပါတယ် ။ မိသားစု ၃...